Yini imvula: izici, ukwakheka nezinhlobo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | 30/09/2021 10:00 | Isimo sezulu
Sijwayele ukuna njalo noma cha kaningi kuye ngokuthi sikuphi. Kodwa-ke, abantu abaningi abazi yini imvula nokuthi ikhiqizwa kanjani. Amafu akhiwa inani elikhulu lamaconsi amanzi amancane namakristalu amancane eqhwa. Lawa mathonsi amanzi namakristalu amancane eqhwa aqhamuka ekushintsheni kwesimo kusuka kumhwamuko wamanzi kuya kuketshezi futhi okuqinile esikalini somoya. Isisindo somoya siyakhuphuka sipholile size sigcwale bese siphenduka amaconsi amanzi. Lapho amafu agcwele amaconsi amanzi futhi nezimo zezemvelo zivumelana nawo, ziba ngesimo seqhwa, iqhwa noma isichotho.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokuthi imvula iyini, yiziphi izici zayo nemvelaphi yayo.
1 Iyini imvula futhi yakha kanjani
2.3 Isichotho namakhekheba eqhwa
3 Imvula ngokuya ngohlobo lwefu
Iyini imvula futhi yakha kanjani
Lapho umoya ebusweni ushisa, ukuphakama kwawo kuzokwanda. Izinga lokushisa kwe-troposphere liyancipha njengoba ukuphakama kukhuphuka, okungukuthi, lapho siya phezulu, kuya kuba kubanda, ngakho-ke lapho ubukhulu bomoya bukhuphuka, bushaya umoya obandayo futhi bugcwale. Lapho igcwele, ihlangana ibe ngamaconsi amancane amanzi noma amakristalu futhi izungeze izinhlayiya ezincane ezinobubanzi obungaphansi kwamamitha amabili, okuthiwa yi-hygroscopic condensation nuclei.
Lapho amaconsi amanzi ehambisana nenhlwathi yokuncipha nobukhulu bomoya ebusweni buqhubeka nokukhuphuka, kuzokwakheka ifu elikhulayo eliqonde mpo, ngoba inani lomoya ogcwele futhi ojiyile ekugcineni lizokwenyuka ngobude. Lolu hlobo lwamafu olwenziwe ukungazinzi komkhathi lubizwa ngokuthi yi-cumulus humilis, futhi lapho lukhula lubheka phezulu futhi lufinyelela ubukhulu obukhulu (obanele ukuvumela ukudlula kwemisebe yelanga), abizwa ngamafu e-cumulonimbus.
Ukuze umhwamuko osendaweni egcwele yomoya ugoqene ube ngamaconsi amanzi, kufanele kuhlangatshezwane nemibandela emibili: enye ukuthi ubukhulu bomoya sebupholile ngokwanele kanti okunye ukuthi kukhona izakhi zofinyelo ezimunca umswakama emoyeni.
Lapho amafu esekhiqiziwe, yini evimbela lawo ukuthi akhiqize imvula, isichotho noma iqhwa, okungukuthi, uhlobo oluthile lwemvula? Ngenxa yokuvuselelwa, amaconsi amancane akhiwe futhi amiswe efwini azoqala ukukhula, ngenxa yamanye amaconsi awathola lapho ewa. Ngokuyisisekelo, amabutho amabili asebenza edonsi ngalinye: ukumelana okukuyo ngokugeleza okuphezulu komoya nesisindo sedonsa uqobo.
Uhlobo lwemvula lunikezwa njengomsebenzi wesimo nosayizi wamaconsi amanzi ancipha lapho kuhlangatshezwa izimo ezifanele. Zingaba yimvula, imvula, isichotho, iqhwa, imvula, imvula, njll.
Isichotho siyi- imvula elula, amaconsi ayo mancane kakhulu futhi awe ngokulinganayo. Ngokuvamile, la mathonsi amanzi awamanzisi umhlaba kakhulu, kepha ancike kwezinye izinto ezinjengejubane lomoya nomswakama ohambisanayo.
Amashawa angamaconsi amakhulu amanzi athanda ukuwa ngodlame ngesikhathi esifushane. Ngokuvamile izimvula zenzeka lapho umfutho womoya ukhona iwa futhi yakhe isikhungo sengcindezi ephansi ebizwa ngokuthi isiphepho. Izimvula zihlobene namafu afana ne-cumulonimbus akha ngokushesha okukhulu, ngakho-ke amaconsi amanzi aba makhulu.
Isichotho namakhekheba eqhwa
Izimvula nazo zingaba sesimweni esiqinile. Ngalokhu, amakristalu eqhwa kufanele akhe emafwini angaphezu kwamafu, futhi izinga lokushisa liphansi kakhulu (cishe -40 ° C). Lezi zinhlayiya ingakhula emazingeni okushisa aphansi kakhulu ngenxa yamaconsi amanzi aqandayo (ukuqala kokwakhiwa kwesichotho) noma ngokungeza amanye amakristalu ukwakha amakhekheba eqhwa. Lapho zifinyelela usayizi ofanele futhi ngenxa yamandla adonsela phansi, uma izimo zemvelo zilungile, zingashiya ifu futhi zikhiqize imvula eqinile ebusweni.
Kwesinye isikhathi iqhwa noma isichotho esiphuma efwini, uma sihlangabezana nongqimba lomoya ofudumele lapho kuwa, sizoqhaqhazela ngaphambi kokufika emhlabathini, ekugcineni kuholele emvuleni oketshezi.
Imvula ngokuya ngohlobo lwefu
Uhlobo lwemvula luxhomeke kakhulu ezimweni zemvelo zokwakheka kwefu nohlobo lwefu olwakhiwe. Kulesi simo, izinhlobo ezivame kakhulu zemvula ziyizinhlobo ezingaphambili, zesimo sendawo nezokuhambisa noma ezinesiphepho.
Imvula engaphambili imvula ehlotshaniswa namafu nezimpande (kufudumele futhi kuyabanda). Impambana yomgwaqo phakathi kwengaphambili elifudumele nelangaphambili elibandayo yakha amafu futhi yakha imvula engaphambili. Lapho umoya omningi obandayo uphushela phezulu futhi ushukumise isisindo esifudumele, kuyakheka indawo engaphambili ebandayo. Njengoba iphakama, izophola futhi yakhe amafu. Endabeni yengaphambili elifudumele, ubukhulu bomoya ofudumele buhamba phezu kwesisindo somoya esibandayo.
Lapho ukwakheka kwengaphambili elibandayo kwenzeka, ngokujwayelekile uhlobo lwamafu olwakhekayo i- a Cumulonimbus noma i-Altocumulus. Lawa mafu avame ukuba nokuthuthuka okuqonde mpo futhi, ngakho-ke, abangela imvula enamandla kakhulu futhi ephakeme. Futhi, ubukhulu bethonsi bukhulu kakhulu kunalawo akha ngaphambili okufudumele.
Amafu akha ngaphambili okufudumele anomumo ohlukaniswe ngokwengeziwe futhi imvamisa I-Nimboestratus, IStratus, I-Stratocumulus. Imvamisa, imvula eyenzeka kulezi zingxenye ithambile, yohlobo oluconsayo.
Endabeni yemvula enesiphepho, ebizwa nangokuthi 'izinhlelo zokudlulisa', amafu anokuthuthuka okuningi okuqondile (I-Cumulonimbus) ngu ezokhiqiza izimvula ezinamandla nezesikhashana, imvamisa ezinesikhukhula.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokuthi iyini imvula nokuthi yiziphi izici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Yini imvula